Numeri Nyaya | Martech Zone
Mugovera, October 29, 2011 Mugovera, October 29, 2011 Douglas Karr
Ndanzwa vanoremekedzwa pasocial media vanhu vachiti, "Usaite hanya ne nhamba yevateveri une." uye “hazvina basa vangani mafeni une". Vari kukanganisa. Dai zvisina basa, isu tingadai tisinga verengere iwo. Isu verenga zvese… Uye tinotonga munhu wese nenhamba dzatinoona. Regai nditsanangure.
Parizvino, pane kumukira pamusoro peKlout uye neshanduro yeshanduro yavakaita. Hunhu hwekupokana hwekurova nzira dzakashanduka uye zvikwata zveKlout zvevanhu zvakadonha - zvakanyanya kune tune angangoita gumi mapoinzi, mazhinji achidonhedza kusvika pamakumi maviri mapoinzi. Klout inodzivirira kufamba nekupa mhinduro kuti iyo itsva algorithm shanduko inopa yakanyanya kuratidza chiratidzo cheumwe munhu online pesvedzero.
Vanhu havana basa nazvo kururama. Ivo vane hanya nazvo nhamba.
Handina chokwadi nazvo Zvinangwa zvaKlout vaive vakuru. Kudonha kubva pachikwata cheKlout svondo rapfuura pa71 kuenda kuchikwata cheKlout che61 svondo rino zvinoreva hapana sezvo nhamba yacho pachayo ingori geji rekukosha.
Ichokwadi, zvakadaro, ndechekuti huwandu hwenhamba chinhu chaive chakakosha kune vanhu vazhinji kuti vafungidzire simba ravo nekudyidzana pamhepo. Dai Klout akagadzirisa algorithm pini pane imwe nguva pamusoro pemwedzi mishoma, vangadai vasina kuwana backlash. Asi kana ndiri kuenzanisa kuedza kwangu nemumwe munhu akafanana uye zvibodzwa zvavo zvakaramba zvakaenzana asi yangu yakadonhedza… kuonekera kwe mhando yeiyo system inopinda mubvunzo. Izvi ndizvo zvakaitika… uye Klout ave kuyedza kuchera.
Mune mawonero angu, Klout ingadai iri nani pane kungowedzera chiyero pane kudzikisira zvibodzwa. Dai chiyero chaive zana zvisati zvaitika, vangadai vakawedzera icho kusvika pa100. Kugadziriswa kwacho kwaizoita kuti shanduko muzvikwata zvevanhu veKlout isakoshe. Ndinovimba izvi zvinoputika, ini ndichiri fan weizvo Klout iri kuyedza kuzadzisa (kunyangwe ini ndichiri kufunga kuti chikamu chakapatsanurana sezvo chisiri chekutsvaga kana traffic stats mukutarisa).
Kana iwe usingatende kuti iwo manhamba ane basa, urikuseka pachako. Kazhinji nguva, isu tine vatengi vane 0 vateveri, 0 vateveri, 0 retweets, 0 maonero, 0 kuda, nezvimwe.Mumwe wevatengi vedu vachangoburwa aive nevhidhiyo inoshamisa online yaive yakanyorwa zvinehunyanzvi uye yakaratidza kuratidzwa kwakanaka kwazvo kwechigadzirwa chavo. Dambudziko raive rekuti paive nemaonero gumi nemana evhidhiyo.
Vashoma vanhu vanotora nguva yekuona vhidhiyo ine gumi nemaviri maonero.
Saka, takaita zvaizodaidzwa nevamwe anonyomba. Mushure memwedzi mishoma uye mazana mashoma maonero, ndakabuda uye yatengwa zviuru gumi maonero uye 1,000 anoda kubva kusevhisi. Haisi pamutemo uye haina kutyora chero munhu mazwi ebasa. Inonzwika unyengeri, zvakadaro. Mukati memavhiki maviri, yaifambisa vhidhiyo yeYouTube kusvika kune zviuru gumi zvekuona. Kwapera vhiki uye vhidhiyo yave kugara pairi pamusoro pezviuru gumi nezviviri uye vaviri vaviri vanofarira. Vhidhiyo imwechete, zvimwe chete zvirimo, ikozvino ichiwedzera zviuru zviviri zvekuona pasvondo pane gumi.
Vanhu VANofurirwa neNhamba
Vanhu vane ~ vateveri makumi mashanu vanogona kuwedzera vateveri makumi mashanu pazuva kuTwitter. Kune mumwe munhu mutsva kuTwitter, kuwedzera vateveri makumi mashanu mumwedzi kungave kwakanaka… asi izvo hazvisi kuzoitika. Ini handina basa nekunakisa kwavo zvemukati ... kukura kweavhareji Twitter mushandisi kuchave zvinoenderana kune avo arikutevera. Kana ivo vachida kukurumidza kukura kwavo, ivo vanofanirwa kukwidza nhamba yavo. Zvakare, ivo purists vanopokana kuti kutenga vateveri ndiko Anotyisa. Izvo zviri nyore kwavari kuti vataure kana vaine zviuru zvevateveri kare.
Dambudziko nenhamba nderekuti havawanzo kuwedzera. Ini ndinoda muenzaniso pazasi… iyo autofollow account pa Twitter. Haingori chete ine simba repamusoro kupfuura ini, zvakare ine simba paKlout pachayo (zvine mutsindo, ine simbawo pabasa uye pamusika wemasheya).
Kubloga Kwakakurumbira uye Nhamba
Kushandisa manhamba kuri nyore. Ini ndinorangarira apo chiyero chegoridhe chekuzivikanwa pane blog yaive yako Feedburner nhamba yevanyoreri. Gmail yakauya pachiitiko ichi uye yakabvumidza vanhu kuve neemail kero vane chirevo mukero yeemail. Semuenzaniso, kana yangu email kero izita@domain.com, ini ndinogona kushandisa zita+1@domain.com, zita+2@domain.com, zita+3@domain.com, nezvimwe. Iwo mashoma mabloggi akabata pane izvi uye vakangonyora zvinyorwa kuti vanyore makumi ezviuru zvevanyori kune yavo yega Feedburner email.
Mhedzisiro yacho? Mablog avo akakura mukuzivikanwa muusiku. Vamwe vavo vakatokwanisa kutengesa kushambadza uye kutsigira zvichienderana nenhamba dzakakwidziridzwa. Seyedzo, ndakatenga blog post pane imwe yemablog uye ini ndakawana mazana mashoma emhinduro kunze kweiyo blog mazana ezviuru zvevanyori. Zvakasimbisa fungidziro dzangu. Vakange vakawedzera huwandu hwavo.
Makore gare gare, blog yangu ichiri kukura mukuzivikanwa uye kuverenga. Yakave yakakurumbira blog nechero munhu zviyero. Asi… iwo mablog kubiridzirwa zvichiri kumberi kwangu pane akawanda masosi masosi. Vakanga vaine zvemukati zvekuchengetedza iyo kukura, saka vakaita zvakanaka. Ini ndinozvidemba kwete nokunyengedza sezvavakaita? Chaizvoizvo, hongu. Ndinozvidemba. Ndingadai ndakatora mukana iwoyo iwo paakasimuka.
Unogona Kutenga Chero Nhamba
Unogona kutenga chero chinhu. Vateveri, Fans, Retweets, Vanofarira, Peji dzinoonekwa, Youtube Views, Youtube inofarira… Kune masevhisi pese pawebhu. Ndakaedza toni yeaya masisitimu uye mamwe anoshanda zvirinani pane mamwe. Mubvunzo, mumaonero angu, hauzi here kuti izvi zvine mutsigo here kana kuti kwete ... mubvunzo ndewe wekudyara. Unogona kutenga nhamba kunyatso kuwedzera kuoneka uye mukurumbira wezvigadzirwa zvako kana masevhisi online? Dzimwe nguva… zvinoenderana nekuti kusimudzira kwako kunomira here!
Ndine shamwari dzangu dzinovhunduka kuti ndakabhadhara masevhisi aya, asi vhiki rinotevera ivo vari kundikumbira kusimudzira chiitiko kana chigadzirwa chavanacho. Kunakidza… vanofunga kuti neimwe nzira inehunhu asi votambanudza ruoko pavanogona kubatsirwa nazvo.
Unofanira Kutenga Manhamba?
Handitendi izvozvo kutenga nhamba zvakaipa ... ndeyekushambadzira mari senge chero chinhu. Nyaya iripo ndeyekuti iwe unozogona here kushandisa mari kune iyo investa uye nekupa zvemukati izvo zvinokwanisa kukura izvo zvinotevera. Ukasadaro, warasa mari. Hapana chakaipa, hapana kusvibiswa kune chero munhu kunoitwa… kunze kwebhuku rako rehomwe.
Cherechedza: Ndinotenda kuti ndizvo unyengeri kutengesa kushambadza zvichienderana nenhamba dzaunoziva kuti hadzisi dzechokwadi.
Vanhu vazhinji havazobvumirani neni zvine mutsindo panhau iyi. Chii chinonzi kushambadzira uye kushambadzira pakati payo? Dai zvese zvaitsamira pakukura kwehupenyu, isu tese tingave kunze kwebasa muindasitiri yekushambadzira.
Ndiri kukanganisa mukurumbira uye maitiro evatengi kana ini tenga mafeni? Hongu!
Ndiri kushandisa mukurumbira here ini pandinohaya nyanzvi yekugadzira kugadzira brand kuti iite senge iri kambani hombe kupfuura zvazviri? Hongu!
Kushambadzira ndezvekukudziridza pikicha mumusoro wevatarisiri kuti ivo vanoda basa rako. Kushambadzira zvakare kuri kutora mukana wevatengi maitiro ekuwedzera mhedzisiro yebhizinesi. Ini handigone kubatsira kuti ruzhinji rwevanhu haruteerere nhamba diki… Asi ini ndinogona kuchinja manhamba kuitira kuti vateerere!
Kushambadzira kunowana vanhu pasuo rako. Ibasa rako ku seta zvinotarisirwa uye uzvi pfuure nevatengi vako. Kana kushambadzira kwako kukaisa zvinotarisirwa iwe zvausingakwanise kuchengeta, saka unoreva nhema uye zvakaipa. Asi kana iwe ukatenga boka reYouTube maonero, vhidhiyo yako inoenda nehutachiona, uye iwe wotengesa toni yechigadzirwa kune vatengi vanofara nekuda kwayo, yaive mari huru yekushambadzira.
Kuisa kwedu mari mumasevhisi aya hazviwanzo. Ndipo chete patinenge tichishanda nemunhu, chigadzirwa kana sevhisi zvatinoziva kuti zvichaita nemazvo zvatinoisa mari. Kana kana isu tiri kushanda nemutengi iyo inoda kuwana kukwidziridzwa kubva pasi nekukurumidza. Mumamiriro ese ezvinhu, isu tinowanzo shandisa masevhisi sekickstart kuti vakure. Kamwe pavanokura, hapana chikonzero chekuenderera.
Unogona kushamiswa nemashandiro azvinoita - ndinokukurudzira kuti uzviedze wega… tenga 5,000 yechimwe chinhu uye wotarisa kuti inokurumidza sei kukura.
Gumiguru 29, 2011 na8: 13 PM
Kunyengetedza. Asi zvakadii nezve kutenga 5-nyeredzi ongororo?
Gumiguru 29, 2011 na10: 36 PM
Izvo zvinosemesa ndezvekuti akawanda ekuongorora mapakeji anopa masheya wongororo pari ipapo bat. Kurudziro yangu pamusoro ndeye kungoita kuti kambani isvike kune iyo yeruzhinji inogona kutora. Ini ndaizowedzera kuti iyi haisiriyo yega nzira yedu. Kufanana neizvi kukwidziridzwa, isu tiri kunyatso kuita kusimudzira chaiko - kukumbira vanokurudzira kuti vaongorore nezvechigadzirwa. Isu hativabhadhare kuti vanyepe… isu tinopa chaizvo chigadzirwa uye nekurega machipisi awire kwavanogona. Ini ndinotenda kuongorora kwechigadzirwa kwakanyanya kutsigira kupfuura "nhamba" yakapusa.
Ini ndinowedzera, zvakare, kuti vanhu vazhinji havapindure zvakanaka kune mashanu-nyeredzi ongororo. Ini ndaive pamusangano makore apfuura uko vagadziri vezvigadzirwa vakati huwandu hwakawanda hwe5-nyeredzi ongororo dzakadonhedza kutengesa. Vanhu vakatenga zvimwe 5-nyeredzi zvigadzirwa mushure mekunge vatarisa izvo zvisina kukwana nezvechigadzirwa. Dai chaive chinhu chisina kuvanetsa, vaitenga.
Ndiyo imwe inonakidza nuance yemutengi maitiro.
Gumiguru 29, 2011 na11: 06 PM
Kutenda nemhinduro inofungisisa. Ichokwadi: pane chipingamupinyi chepantom chaunoda kuyambuka usati watorwa zvakanyanya nevasingazive. Muteveri kuverenga ndiyo sutu uye tayi yekushambadzira.
Asi ini ndinongozviwana zvakadaro… icky. Ini ndinoshamisika kana vanhu vaifunga nenzira iyoyo nezve kushambadzira apo izvo zvaive zvisina kugadzirwa zvishoma? Senge, "sei ndichiudza vanhu kuti chikuru chigadzirwa changu, kunyepa?"
Gumiguru 29, 2011 na11: 20 PM
Ini ndinofunga "icky" inzira yakanaka yekuitsanangura. Zvinotaridza kwandiri kuti mazuva ano ihwo huipi hunodiwa. Uye masevhisi aya ari kuputika… saka mumwe munhu ari kuashandisa!
Gumiguru 30, 2011 pa 8:35 AM
Mazita emasevhisi akasarudzika & mitengo?
Gumiguru 30, 2011 na4: 55 PM
Unogona here kutaura kuti ndanga ndichiedza kunzvenga izvozvo, Kenan? 🙂 Ndakave nerombo rakanaka neSocialkik neRetweet.it - ​​vese vanotaura pachena uye vakapa rutsigiro nemhinduro.
Gumiguru 30, 2011 pa 11:49 AM
Semunhu wekushambadzira uye wemabhizinesi ndinobvumirana nechinzvimbo chako nezve kutenga kwekuda, maonero, uye ma1s sekudyara. Kune zviitiko zvakawanda zvekushambadzira munzvimbo isiri-yedhijitari iyo inoita zvakafanana. Makwikwi nemubairo, kutora ongororo nezvikurudziro, makuponi - izvi zvese zvinovavarira "kutenga" nguva, kutarisisa, uye kuita.
Asi iyo mutsara unodhonzwa kupi? Chiito chekutenga zvinodiwa, maonero, uye ma1 zvinogona kukanganisa kuvimba. Mutengi wako ane vhidhiyo inoshamisa angave achida kutaura pachena kuti vakatenga maonero? Ini ndinofungidzira kuti mhinduro ndeyekuti nekuti mutengi iyeye ane imwe nhanho yekuvimba yakavakirwa nechavo chevatengi base chavaisazoda kukanganisa.
Mumwe muenzaniso: Google Nzvimbo ongororo dzinogona kutengwa pane saiti senge Fiverr (http://fiverr.com/ kana Elance (https://www.elance.com/ ). Hapana chimwe chinonyanya kuodza moyo kuve neinowanikwa pane internet uye hauna ongororo. Ini, semutengi, ndichaenderera kune rimwe bhizinesi mukutsvaga kwangu kwekudya. Asi kana ndikaona resitorendi ine wongororo ndichavaverenga ndoita sarudzo. Kana ndikawana ongororo dzakanyorwa nevanhu vasina kumboedza chikafu kana kutsika munzvimbo ini ndaisazovimba nehurongwa (zvakawanda pane iyi pfungwa pa http://agtoday.us/vyVjXn).
Kune zvakare mukana wepamutemo wekutarisa: Tarisa kuUS Federal Trade Commission (FTC) nhungamiro dzinodzora zvibvumirano uye zvipupuriro (http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm ). Zvinogona kupikiswa kuti kutenga likes kuri kutenga endorsement uye nekudaro inofanirwa kuburitswa. Kana pasina kuzivisa mutengi akafanana ari panjodzi yekufumurwa kumatare uye faindi.
Semutungamiri anotungamira (hongu, ndinokutora semutungamiri anofunga, unogona kuisa chikwangwani pamusuwo wehofisi yako :), unotariswa se _trured_ sosi yekuziva uye hunyanzvi. Zvekuti iwe wakanyora ino chinyorwa zvinotibatsira kuti tinzwisise iko kwekutanga kwekushambadzira, kushambadza, uye neruzhinji hukama. Ndinovimba hausi kutenga zvekuda nguva dzese :)
Padivi katsamba: pane fomula inogara ichiita / chiyero / curve iyo bhizinesi inofanirwa kufunga nezvayo nguva yekutenga kuti uwane iyo "yakakosha yekutsigira misa" vobva varega kutenga?
Gumiguru 30, 2011 na4: 51 PM
Kune avo vanhu kunze uko vanodzinga zvachose pfungwa yekuti kutenga vateveri, nezvimwe, zvakashata zvakashata, ndinoda kupa fananidzo inogona kuchinja pfungwa. Isu hatisi kuburitswa zvese apo Budweiser, Coca Cola, Nike, Ford, ese makambani makuru, vanopedza mamirioni pachiratidziro chimwe cheiyo Super Bowl. Chirevo ichocho "chakawana" kodzero yekuburitswa nhepfenyuro, zvichibva pane imwe nhepfenyuro yemagariro moto yekufarirwa? Kwete, vakangozvitenga. Chokwadi ndechekuti isu sevashambadzi tinoita zvinhu kubatsira vatengi vedu, vashandirwi, kutengesa zvimwe zvinhu.
Tiri kusangana zvishoma naDr.Jekyll naMnu Hyde nguva muzvinhu zvese zvemagariro. Kune rimwe divi, isu dzimwe nguva tinoda kuchengetedza kuchena kwehupenyu hwevanhu, asi isu hatibhenekera ziso kana tichishandisa zvakaderera pane zvakaringana zvekushambadzira zviitiko zvinoita sekutyora mweya uye chinangwa cheizvo zvemagariro venhau zvinoreva.
Uye ini ndinofunga vazhinji vedu vatinoshanda navo vachiri mumusungo mukufunga kuti kuve nevateereri vazhinji neimwe nzira kunoreva mukurumbira, kuvimba, uye nezvimwe zvese izvo zvinhu.
Gumiguru 30, 2011 na4: 53 PM
Zvakanaka isu tinoziva chaizvo kuti vatengi vakasungwa mune iyo pfungwa, Marty!
Gumiguru 30, 2011 na8: 19 PM
Ko kuwanda senge, RTs, uye + 1s kutenga zvinobatsira sei niche maindasitiri? Iwo masevhisi awakataura nezvawo haakwanise kutarisa kune chero rakamanikana boka, taura senge zvidiki zvipfuyo vets kana vafundisi.
Ko nzira yemabhizimusi eniche ndeyekutsvaga kushandisa simba rekutenga kuwanda kwenhamba kuwedzera apo ichigadzira niche uye chivakwa chakamanikana kuburikidza nedzimwe nzira dzezvekudyidzana.
Gumiguru 30, 2011 na8: 53 PM
Ini handizive kuti chero munhu anotsvaga panodzokororwa kana kudiwa kunobva, saka handina chokwadi kuti zvine basa kuti chinangwa chacho chiri niche kana chakafara. Kubatsira kwechikamu che niche, ndinofunga, ndechekuti panogona kunge kusine tarisiro yemavhoriyamu akakura senge pane ine musoro wakafara.